International Corporate magweta muNetherlands - Law & More
Sa muzvinabhizimusi, une zvakawanda zvekuita. Izvi zvatotanga nekutangwa kwekambani yako: uchagadzira sei kambani yako, uye ndeipi fomu repamutemo rakakodzera? Kufungirwa kunofanirwa kupihwa kugovera varidzi, chisungo uye kuita sarudzo. Zvibvumirano zvakanaka zvinofanirwawo kupedzwa. Iwe uchitova nekambani yakasimbiswa here?
KORWALTHI MUTEMO GWAYERI
NENZIRA DZINOBUDIRIRA - LAW & MORE
Sarudza iyo KORPORATE MUTEMO MAGWeta E LAW & MORE
Zvemunhu uye zvinowanikwa nyore
Zvido zvako kutanga
KANA KUSHANYA +31 40 369 06 80
KORWALENDA MUTEMO WEMAHARA NENZIRA DZINOGONESESA - LAW & MORE
Sa muzvinabhizimusi, une zvakawanda zvekuita. Izvi zvatotanga nekutangwa kwekambani yako: uchagadzira sei kambani yako, uye ndeipi fomu repamutemo rakakodzera? Kufungirwa kunofanirwa kupihwa kugovera varidzi, chisungo uye kuita sarudzo. Zvibvumirano zvakanaka zvinofanirwawo kupedzwa. Iwe uchitova nekambani yakasimbiswa here? Muchiitiko ichocho, zvakare, iwe pasina mubvunzo uchafanirwa kubata nemutemo wekambani. Mushure mezvose, zvemutemo zvinhu zvinogara zvichitamba rakakosha basa mukati mekambani. Zvakawanda zvinogona kuchinja mukati mekambani yako pamusoro pemakore. Semuenzaniso, mamiriro ezvinhu kana mukati mekambani yako angangoda imwe fomu yepamutemo yekambani yako. Uye zvakare, iwe ungatofanira kugadzirisa makakatanwa pakati pevanogovana kana vadyidzani mukati mekambani yako. Uye zvakare, kubatanidzwa kana kuwanikwa nemamwe makambani kunoitikawo nguva zhinji. Ndeipi fomu yemutemo yaunosarudza uye ungagadzirisa sei makakatanwa padanho repamutemo? Semuenzaniso, zvibvumirano zvinofanirwa kumiswa here kana zvibvumirano zvitsva zvinogumiswa?
> Nhanho-nhanho chirongwa chekambani mutemo gweta
> Kutanga bhizinesi
> Mutemo wechibvumirano mukati memutemo wekambani
> Kubatanidza uye kutenga
> Shandira pamwe neimwe kambani
Nemibvunzo yako yese mundima yemutemo wekambani, wauya kunzvimbo chaipo negweta rekambani kubva Law & More. At Law & More isu tinonzwisisa kuti saamabhizimusi iwe unoda kuve nechekuita mune zvemabhizimusi nekuvandudza mazano uye kwete nenyaya dzemutemo. Gweta rekambani kubva Law & More unogona kutarisira zviri pamutemo zviri mukati mekambani yako, kuti iwe ugone kutarisa pane izvo zvaunoda kuita: kumhanyisa rako bhizinesi. Law & More'' Magweta inyanzvi mumunda wemutemo wekambani uye anogona kukupa rairo yezvemitemo kubva panguva yekubatanidzwa kusvika panguva yekumiswa kwekambani yako. Isu tinoshandura mutemo kuita nenzira dzinoshanda, kuitira kuti unyatso kubatsirwa nezano redu. Kana zvichidikanwa, magweta edu achafarawo kukubatsira iwe nekambani yako mune chero chiitiko. Muchidimbu, Law & More inogona kukubatsira zviri pamutemo nenyaya dzinotevera:
• kuvambwa kwekambani;
• kushandira pamwe pakati pemakambani;
• kubatanidzwa nekutenga;
• kutaurirana nekukakavadzana mumakakatanwa pakati pevashandi uye / kana vashandi.
Iwe unobatanidzwa nemutemo wekambani here? Ndapota udza mashoko Law & More, magweta edu achafara kukubatsira!
"Law & More inobatanidzwa
uye inogona kunzwira tsitsi
nezvinetso zvemutengi wayo ”
Nhanho-nhanho chirongwa chekambani mutemo gweta
Iwo mutemo wemakambani magweta pa Law & More shandisa nzira inotevera:
1. Kujairirana. Kuda kuziva nezve chii Law & More inogona kukuitira iwe nekambani yako? Ndapota taura Law & More. Iwe unogona kujairana uye wotumira mubvunzo wako kumagweta edu nerunhare kana e-mail. Kana zvichidikanwa, ivo vacharonga musangano wako ku Law & More office.
2. Kurukurai nhanho-nhanho chirongwa. Munguva yekugadzwa kuhofisi, tichazokuziva zvakare, tichakurukura nezvepamberi pemubvunzo wako uye kuti ndedzipi mhinduro dzinogona kunge dziri munyaya iri pamutemo yekambani yako. Magweta e Law & More ratidzawo zvavanogona kukuitira nenzira dzakananga uye zvingaite matanho ako anotevera.
3. Ita danho nedanho. Paunoraira Law & More kumiririra zvaunofarira, magweta edu achagadzira kontrakiti yemasevhisi. Chibvumirano ichi chinotsanangura hurongwa hwavakambokurukura newe. Basa rako rinowanzoitwa negweta rawakambosangana naro.
4.Kubata kesi. Maitiro ekubatwa kwenyaya yako anoenderana nemubvunzo wako wepamutemo, uyo unogona kunge uchienderana, semuenzaniso, kutora zano, kuongorora chibvumirano, kana kuitisa matanho epamutemo. At Law & More, isu tinonzwisisa kuti mutengi wese uye bhizinesi rake rakasiyana. Ndosaka tichishandisa nzira yedu pachedu. Magweta edu anogara achiedza kugadzirisa chero nyaya iri pamutemo nekukurumidza.
Kana iwe uchida kutanga rako bhizinesi, iwe unofanirwa kusarudza fomu repamutemo rekambani yako. Iwe unogona kusarudza fomu repamutemo kana kana pasina hunhu hwepamutemo. Iyi sarudzo inosarudza chimiro chepamutemo chekambani yako.
Gweta remutemo wekambani rinobatsira kuona fomu repamutemo
Kana iwe ukasarudza fomu repamutemo rine hunhu zviri pamutemo, kambani yako inogona kutora chikamu yakazvimiririra mukutengeserana kwepamutemo, sezvinoita munhu wechisikigo. Kambani yako inogona kuzopedzisa zvibvumirano zvakadaro, kuva nezvinhu uye zvikwereti uye kuve nemhosva.
Mienzaniso yemasangano epamutemo ane hunhu hwepamutemo ndeaya:
• yakazvimiririra yakatemerwa kambani (BV)
Kambani yeruzhinji (NV)
Iyo BV neNV inowanzo shandiswa kune kambani ine chinangwa chebhizimusi. Kana kambani yako iine chinangwa chekufunga, inogona kunge iri sarudzo yekumisikidza hwaro nekubatanidza kambani kwariri. PaBV kana NV, zvinodikanwa kukwezva vagovana. Nekudaro, zvinokwanisika kuti iwe pachako uve (wega) mugovani wekambani. Iwe unogona zvakare kuverenga zvimwe pamusoro pemafomu ataurwa pamusoro apa mune yedu blog 'Ndeipi fomu yepamutemo yandinosarudzira kambani yangu?'.
Kana paine hukama nevane masheya, zvinonyanya kukosha kuti hukama uhu hunonyorwa zvakanaka. Kuchenjera kuve ne chibvumirano chevashandi yakagadzirirwa izvi. Law & MoreMagweta emakambani anogona kukubatsira kunyora kana kuongorora chibvumirano chevashandi.
Corporate mutemo gweta anobatsira mukunyoresa kambani
Nekudaro, zvakare zvinokwanisika kusarudza fomu repamutemo risina hunhu hwepamutemo, sekudyidzana kwese kana kudyidzana. Nemafomu aya epamutemo zvakakosha kuti zvibvumirano zvakanaka zviitwe pakati pevakabatana kana vabatiri, izvo zvinoiswa muchibvumirano chekudyidzana, semuenzaniso. Sarudzo yefomu repamutemo ine pesvedzero yakanangana nenyaya dzakadai sekubhadhara mari uye chisungo. Kana iwe ukasarudza fomu repamutemo risina hunhu hwepamutemo, kambani yako haigone kutora chikamu mukutengeserana zviri pamutemo zvakazvimiririra uye iwe uri, semuenzaniso, unokweretwa neako epachivande zvinhu kune zvikwereti zvinopinda izvo kambani yako inopinda.
Mienzaniso yemafomu epamutemo asina hunhu hwepamutemo ndeiyi:
• yega proprietorship
• kudyidzana (VOF)
• kudyidzana kushoma (CV)
Unogona kuverenga chaizvo zvinorehwa nemasangano epamutemo izvi uye nezvakanakira nekuipira zviri mubhurogi redu 'Ndeipi fomu yepamutemo yandinosarudzira kambani yangu?'.
Law & More'' Masangano emakambani anogona kukubatsira kusarudza fomu repamutemo chairo. Law & More'' Masayendisiti emakambani achashanda newe kuona kuti ndeipi fomu iri pamutemo inokodzera kambani yako. Kana chinodiwa chepamutemo chave kunyorwa zvakajeka, kambani inofanirwa kuvambwa uye inyoreswe neChamber of Commerce. Law & More inoratidzira maitiro aya iwe.
Mutemo wechibvumirano mukati memutemo wekambani
Kamwe kambani kana yagadzwa uye kumiswa, unogona kutanga kuita rako bhizinesi zviitiko. Nekudaro, iwe uchaona kuti zvemutemo zvinhu zvakare zvinoita basa rakakura pano. Semuenzaniso, usati wapinda muhukama nevatengi, ungangodikanwa kuti upe zvakavanzika ruzivo. Muchiitiko ichocho, zvinokurudzirwa kutora chibvumirano chisiri chekuzivisa. Izvo zvino zvakakosha kunyora zvese zvibvumirano nevatengi kana vatengesi muchibvumirano. Kugadzira mazwi akajairwa uye mamiriro anogona kubatsira kune izvi. Iwo mutemo wemakambani magweta pa Law & More inogona kudhirowa uye kuongorora zvibvumirano uye zvakajairwa mazwi uye mamiriro ako, kuti iwe usatariswe nechero kushamisika.
Kunyangwe kana zvese zviri mundima yepamutemo zvakanyatsorongedzwa mukati mekambani yako, pane zvinosuruvarisa zvichiri mukana wekuti mubatsiri haadi kushandira pamwe kana kusaita zvibvumirano zvake. Kuti usakanganisa hukama nevatengi kana vatengesi, zvinokurudzirwa kutanga wasvika kune ine rugare mhinduro. A Law & More magweta anogona kukubatsira mune izvi. Nekudaro, kana zvisingaite kugadzirisa gakava, matanho epamutemo angangoda kutorwa. Law & More ine ruzivo rwakakura mukuitisa zviri pamutemo mumutemo wemakambani uye inoita zvese zvainogona kuti uwane mhedzisiro yako.
Mumunda wezvibvumirano mune zvemutemo wemakambani, unogona kubata Law & More nemibvunzo nezve:
• kunyora nekuongorora zvibvumirano;
• kumisa zvibvumirano;
• kunyora chiziviso chakanyorwa chekutadza mukutadza kutevedza chibvumirano;
• kugadzirisa kusawirirana kunobva mukugadziriswa kwechibvumirano;
• kutaurirana zvirimo zvezvibvumirano.
Uri kuronga kubatanidza kambani yako neimwe kambani, semuenzaniso nekuti iwe unoda kukura kambani yako? Ikozve kune nzira nhatu makambani anogona kusangana:
• kubatanidzwa kwekambani
• kubatanidzwa kwemasheya
• kubatanidzwa kwepamutemo
Ndeupi mubatanidzwa wakakodzera kwazvo kukambani yako zvinoenderana nemamiriro ako chaiwo. Gweta remutemo wekambani kana gweta remutemo wekambani kubva Law & More inogona kukuraira pane izvi.
Izvo zviripowo zvakare zvinoita kuti imwe kambani inofarira kambani yako uye kuti iwe unopihwa kutengesa kambani yako kune imwe kambani. Une chokwadi nezvekutora uye urikufunga nezve kuchinjisa bhizinesi? Tinogona kukutsigira mukutaurirana pamwe nekupa mazano pamberi. Kana zvisiri, inogona kuve inotora kutora. Isu tinotaura nezvekutora ruvengo kana kambani ikasashandira pamwe mukutengeswa kwemasheya ayo uye imwe kambani, kureva, uyo anotora, anotendeukira kune vanozogovana pachavo. Isu tinoziva kuti kambani yako ingadzivirirwe sei pane izvi uye nekudaro inogona zvakare kukupa iwe rubatsiro rwemutemo mune ino kesi.
Pamusoro pe, Law & More inogona kukubatsira iwe kana iwe uchifunga kutora pamusoro pekambani. Paunotenga imwe kambani sekambani, zvakakosha kuti iwe uite nekukasira kwakakodzera. Iwe unoda ruzivo rwese rwaunoda kuti uite sarudzo yakanyatso ruzivo nezve kubatanidzwa kana kutora. Ungada here kuziva zvakawanda nezve izvi? Law & More'' Masangano emagweta ari pabasa rako.
Shandira pamwe neimwe kambani
Sekambani, iwe unofunga kushandira pamwe nemamwe makambani kuti uchengetedze chinzvimbo chako mumusika? Kana kuti uri kuronga kupinda mumusika mutsva? Kana iwe uchida kugadzira yemubatanidzwa mubatanidzwa, isu tinogona kukuraira iwe nezve njodzi uye mabhenefiti. Uye zvakare, isu tinogona kutarisa newe kuti ndeapi mafomu ekubatana akakodzera. Ungada here kuziva zvakawanda nezve izvi? Ndapota udza mashoko vemutemo vemagweta magweta pa Law & More.
Chii chinonzi mutemo wemubatanidzwa?
Mutemo wemubatanidzwa inzvimbo yemutemo inobata nemutemo wemasangano epamutemo uye iri chikamu chemutemo wakazvimiririra weDutch. Mutemo wemubatanidzwa unogovaniswa mumutemo wevanhu wepamutemo nemutemo wekambani. Mutemo wekambani wakaganhurirwa zvakanyanya kupfuura mutemo wemasangano epamutemo uye unongoshanda chete kune anotevera mafomu epamutemo: akazvimirira makambani (BV) uye veruzhinji makambani mashoma (NV). Mutemo wezvemitemo unobata mafomu ese epamutemo, kusanganisira BV neNV Law & More'' Masangano emakambani anogona kukubatsira kusarudza fomu repamutemo chairo. Law & More'' Masayendisiti emakambani achashanda newe kuona kuti ndeipi fomu iri pamutemo inokodzera kambani yako. Pamusoro pe, Law & More inogona kukubatsira ne:
• kutaurirana nekukakavadzana mumakakatanwa pakati pevashandi uye / kana vashandi;
• kunyora nekuongorora zvibvumirano uye zvirevo nemamiriro.
Ndeipi yekuhaya kambani yemutemo gweta?
Iwe uri muzvinabhizimusi anotarisana nedambudziko repamutemo uye ungade kuti rigadziriswe? Zvino zvine hungwaru kubatanidza gweta remutemo wekambani. Chero nyaya yepamutemo inogona kuve neakakura emari, zvinhu kana zvisingaitwe nekambani yako. At Law & More, isu tinonzwisisa kuti chero dambudziko repamutemo rakawandisa. Ndokusaka Law & More inokupa iwe, mukuwedzera kune yakakura uye yakatarwa ruzivo rwepamutemo, yekukurumidza sevhisi uye wega maitiro. Semuenzaniso, magweta edu inyanzvi mumunda wemutemo wekambani. Uye kana zvasvika kumakambani, Law & More inomiririra vanamuzvinabhizimusi muzvikamu zvakasiyana, senge maindasitiri, zvekufambisa, zvekurima, zvehutano uye zvekutengesa.
Ungave iwe unoda kuziva chii Law & More anogona kukuitira iwe seyadhi yemutemo muEindhoven? Ndapota taura Law & More, magweta edu achafara kukubatsira. Unogona kuita musangano:
• nerunhare: 040-3690680 kana 020-3697121
• neemail: [email inodzivirirwa]
• kuburikidza ne Law & More peji: https://lawandmore.eu/appointment/
Ndeipi yechitatu bato mhedzisiro?
Kazhinji, chibvumirano chinongova nemhedzisiro kumapati. Vatatu mapato asiri bato pachibvumirano icho havagone, pachimiro, kuwana chero kodzero uye zvisungo kubva kwazviri. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, zvibvumirano uye zvirevo zvakabvumiranwa imomo zvinogona zvakare kuve nemhedzisiro kune vechitatu mapato, anonziwo echitatu-bato mhedzisiro. Zvinodiwa zviviri zvinoshanda kune wechitatu-bato mhedzisiro yechikamu muchibvumirano:
1. chibvumirano chine chirevo chekuti wechitatu angangoda kuita kubva kune mumwe wemapato kusvika pachibvumirano kana neimwe nzira kukumbira chibvumirano kune mumwe wavo uye
2. wechitatu akagamuchira chirevo ichi achishandisa chirevo chakanyorerwa mumwe wemamwe mapato maviri akabatanidzwa.
Kana izvo zvataurwa pamusoro zvasangana, mapato echibvumirano anogona kukumbira izvo zvakabvumiranwa mariri kupokana neuyu wechitatu kana zvinopesana. Chechitatu-bato mhedzisiro yezvibvumirano dzidziso inowirirana zvakanyanya nemutemo wekambani. Mushure mezvose, mutemo wechibvumirano chikamu chikuru chemutemo wemakambani. Iwe une mibvunzo nezve yechitatu-bato mhedzisiro? Ndapota taura Law & More. Magweta edu emakambani emakambani achafara kukubatsira.
Chii chekuita kana paine vagovana nharo?
Mukati meiyo yakazvimiririra kambani (BV) uye neruzhinji mashoma makambani emakambani (NV), iro simba repamusoro riri kune vagovana (AvA) vekambani. Izvi zvinoreva kuti sarudzo dzakakosha, zvirinani mukati mekambani, dzinowanzo kutorwa nevanogovana (AvA). Sa muzvinabhizimusi haugone kushandisa makakatanwa pakati pevanogovana mukati mekambani yako. Tinonzwisisa izvozvo pa Law & More. Ndosaka tichitsanangura muchidimbu nzira dzinoverengeka dzekugadzirisa nekugadzirisa kusawirirana kwevabatsiri:
• Kupindirana. Kupinda muhurukuro nevane masheya mukati mekambani yako kazhinji danho rekutanga. Zvichida musiyano wemafungiro pakati pevashandi vanogona kugadziriswa nenzira yakapusa kuti iwe ugone kukurumidza kutangazve nzira yakajairika yebhizinesi mukati mekambani yako. Izvi ndezvechokwadi zvakare zvinokwanisika pasi pekutungamirwa kwemuzvimiririra uye asingasaruri murevereri. Mediation inowanzo kukurumidza uye yakachipa pane kutanga mhosva. Iwe unogona zvakare kuwana rumwe ruzivo nezve kupindirana pane peji redu: https://lawandmore.eu/mediation/
• Kugadziriswa kwemakakatanwa epamutemo. Izvo zvinokwanisika kuti zvinyorwa zvekambani yako yesangano kana chibvumirano chevashandi saizvozvi vatopa pekugadzirisa kana paine kupokana kwevabatsiri. Muchiitiko ichocho, zvine hungwaru kuita nzira yakadaro yekugadzirisa kukakavara. Kana zvinyorwa zvesangano kana chibvumirano chevabatsiri chisina hurongwa hwekugadzirisa gakava, iwe uchiri kugona kutevedzera zviri pamutemo gadziriso yekugadzirisa. Musiyano unoitwa pano pakati pekugona kwekudzingwa kana kudzingwa. Kune ese maviri sarudzo, unofanirwa kugonesa mutongi neumboo hwekudikanwa kwekudzingwa kana kudzingwa. Iwe ungade here kuziva kuti izvi sarudzo zvinorevei uye kana uchikwanisa kuzvishandisa iwe? Ndapota taura Law & More. Magweta edu anofara kukupa iwe kuraira.
• Maitiro ekuongorora. Chinangwa cheiyi nzira, iyo inoteedzerwa muIn Enterprise Chamber kuAmsterdam Dare reKutsvaga, ndeye kudzorera hukama hwakanaka mukati mekambani, kusanganisira pakati pevashandi. Iyo Enterprise Chikamu inogona kukumbirwa kuti iongorore iyo kambani uye kukumbira chiyero chiriporipocho, semuenzaniso (kwenguva pfupi) kumiswa kwesarudzo. Iko kuferefeta uye mhedzisiro yacho zvakanyorwa mushumo. Kana zvikaonekwa kuti pakave nekutadza kutungamira, iyo Enterprise Chikamu ichave nemasimba anosvika kure, kuitira kuti kana zvakadaro ungatokumbira kubviswa kwekambani.
Ungade here kuziva nzira yakanakisa yekugadzirisa gakava rekugovana mukati mekambani yako? Ndokumbirawo ubate magweta emakambani e Law & More. Magweta edu anofara kukupa rairo uye, kana zvichidikanwa, zvakare tungamira kambani yako kuburikidza nerekutaurirana.